Asingapeteki akazotsiviwa nemapepa aipeteka Electric Kuwiriranisa sikuta Producer From Koowheel - Jomo Technology Co., Ltd
Asingapeteki akazotsiviwa nemapepa aipeteka Electric Kuwiriranisa sikuta Producer From Koowheel
The Koowheel E1, 2 vhiri standup asingapeteki akazotsiviwa nemapepa aipeteka Self vakadengezera Electric sikuta angangodaro imwe duku uye munyoro uremu akarurama pachake transporter Motokari panyika. Zviri Koowheel Patent Innovative mufashoni inotonhorera design,-siyana headlamps uye anokosha muswe rambi; Pane akatungamirira kuratidza chidzitiro zvachose izvo zvinogona kuratidza bhatiri uye ano nokukurumidza; Vibration Energy Design izvo kuderedza vibration kune pamwero mukuru.
Zviri yemagetsi sikuta kutenga kana uchida vavimbiswe kuwana pamusoro unhu chigadzirwa. E1 ndiye echimurenga muenzaniso itsva kumusoro nemanyorerwo chigadzirwa. Pane zvakawanda zviri pedyo dzinodzvova:
Extendable hunde, zvakanaka zvose vana uye vakuru (Red, rwegirini).
Black Tech akangwara pokutangira kana kusunda kumhanya kusvika 3km / h;
Super kuvhunduka Absorção de Água pamwe 8inch rabha pneumatic tai;
Akapeta uye kutakura nyore;
Free APP kunyora uye kugoverana yenyu rwendo ose, shanduko Kurongwa;
The hoverboard vagadziri kushanda zvikuru kuti hoverboard yavo kuwedzera kugadzikana. Saka, izvi zvinogona kuva simba uye hunogara yemagetsi hoverboard chipi pemvura. The hoverboard hwachinja chiso private chokufambisa; afunga American muzvinabhizimisi Shane Chen muna 2013 pasi brainchild ake "Inventist". Sezvambotaurwa ne Vagadziri zvinokosha zvakarurama kudzidza powerboard Paavhareji zvinotora maminitsi 5 mutengi kumhanya powerboard kubudikidza hoverboard. No defunct zvinhu zviri nokusingaperi kushandiswa pakuvaka yedu vagadzirise zvinhu uye vachamhanya akanyatsorevesa sechitsva. Asati kuenda chaiyo fashoni mavanga, zviri kutanga zvakakodzera kuziva zvaunofanira ingava wakarindira. Zvakanaka, kuororwa ndeyekupedzisira pfungwa. Zvinobudirira, zvimwe hazvisi nani kupfuura denderedzwa rechiedza Rover. Zviri here kuongorora pamwe mitemo yemunyika yenyu. Kana uchida mashoko akawanda kubva yako itsva handsfree segway iwe nani kuenda yakaderera mutengo. Kune zvakawanda vatevedzeri uye chakaremara neshanduro hoverboards ikoko. By shoma mubvunzo hoverboard K7 ndechimwe zvinokosha zvinoshamisa hoverbaords ikoko, uye zvachose pakati yakanakisisa kupinda pamwero hoverboards pamusoro pamusika.
Post nguva: Oct-12-2017